Kugadzirisa x264 vhidhiyo neAvidemux. | Kubva kuLinux
Avidemux iri pamwe chete Kuvhura imwe yeangu andinofarira anoratidza e edit video kana kuishandura kuita mafomati akasiyana uye panguva ino ndamboishandisa kudzikisa resolution yehuremu vhidhiyo kubva 1080p kusvika 720p kuchengetedza mhando yepamusoro uye kuzviita zvimwe chiedza yemutambi wangu.
Dzimwe nguva mavhidhiyo eHD ane akanyanya bitrate uye vane mwero vatambi havagone kuatamba mushe, kana TV yako haina resolution yakawanda seiyo vhidhiyo yainotamba, kana iwe haudi chete kuti bhaisikopo riite zvakanyanya nzvimbo. With AvidemuxNekushandisa zvishoma zvekodhi uye firita kuti resize mufananidzo, tinogona kuwana saizi diki kwazvo pasina kurasikirwa kukuru muhunhu.
Kutanga isu tinoisa Avidemux:
sudo apt-tora kuisa avidemux
Iko kune ech uye yero vhezheni asi haina kushandurwa mumutauro wedu, saka ini ndinokurudzira iyo gtk vhezheni iyo inoshandawo mu KDE uye haina zvakawanda zvinoenderana asi kana iwe uchida kuzviisa, ingo nyora:
sudo apt-tora kuisa avidemux-qt
sudo apt-tora kuisa avidemux-ehl
Iye zvino isu tinomhanya chirongwa kubva ku Menyu, mukati Mutinhimira uye vhidhiyo. Dzvanya pa Vhura Kusarudza sosi yevhidhiyo yatinoda kugadzirisa, hwindo rinoenderana rinovhura kuti riongorore mafaira uye tinosarudza yedu mp4 vhidhiyo.
Tichaona h.264 yakaonekwa, tinya Shandisa yakachengeteka nzira.
Zvino mune codec isu tinosarudza MPEG4 AVC uye mune mafirita isu tinosarudza Mplayer Resize uye gadzirisa saizi yaunoda, pakupedzisira mune odhiyo codec isu tinosarudza kuteedzera kuisiya isina kuchinjika. Tinogona kuongorora mhedzisiro kubva kusefa rewindo uye isu tinongofanirwa kusevha ine zita raunoda.
Iwindo iri rinozoonekwa richiratidza kuti iri encoding ne data raunogona kucherechedza.
Sezvauri kuona, maitiro acho akasununguka, akapusa uye chirongwa chinoshanda nemazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Kugadzirisa x264 vhidhiyo neAvidemux.
Kutenda iyo Avidemux tutoring, ndinofunga ichave inobatsira kwandiri. Iye zvino ndanga ndichiridza imwe yekuvhurika nezvikamu, hahaha, kuti ndione kana mumwe munhu achikurudzirwa.
Tsananguro yakanaka asi kana uchikwanisa kundibatsira kushandura vhidhiyo mu .swf kuita .mpeg4 kana .avi ndingafarire.
Iwe hausati waziva kushandisa OpenShot? yakaipa kwazvo, Leo, yakaipa kwazvo xDD
HEHEH… Ndakaedza kucheka vhidhiyo yeHard Rock Hareruya imwe nguva yapfuura, isa shanduko, nezvimwe, asi hapana chakakomba. Ichokwadi ndechekuti haina kuoma zvachose, asi kuita zvinhu zvakati wandei hazvisi.
Izvo zvinoitwa nenzira yakafanana, ini ndichatsanangura zvakadzama
Kana izvo zvauri kutsvaga ndezve kungochinjisa mavhidhiyo (pasina kuita chero chinogadziriswa kwavari), ndinofunga unogona kushandisa zvakapusa shanduri.
Tsiva mameseji mukati memafaira nemirairo imwe chete: perl